Saaxiibka Naqshadayaasha, dhammaystir weyn u ah 3D-shicib - Geofumadas
Maarso, 2011 AutoCAD-AutoDesk, Engineering, Video
Tani waa mid ka mid ah xalal dhowr ah oo ay bixiso Eagle Point, isla shirkadaas oo bilawday bilaha sagaalaad ee na soo jiidatay wax walba oo ayan AutoCAD sameynin. Ka dib markii xoogaa darajo sare ah oo uu doonayo in uu uga sooco, in ku dhow kasta oo shirkadda soo laabtay ay ujeedada asalka ah, ka dibna AutoDesk oo lahaa qaar ka mid xiiso leh codsiyada injineernimada, naqshadaha iyo dhismaha, taas oo hadda taagan Revit iyo Madaniga 3D
Xiriiriyaha Designer wuxuu fududeeyaa fulinta hawlaha, kaas oo lagu sameyn karo AutoDesk Civil 3D, laakiin si toos ah u shaqeynaya tallaabooyin yar, aynu aragno ugu yaraan hal tusaale:
Waxaan horey u lahaanay dusha sare, oo leh qadka isku-xirka iyo waxa aan rabno waa:
U samee waddo leh jidka saxan ee mitirka 8 iyo mitirka wareegga 65.
Naqshadeeya waxyaabo badan oo ku yaal dhinaca midig oo leh halbeegga 400 mitir murabac ah.
Qodobbo badan oo dhinaca bidixda ah oo leh shaxda mitirka labajibbaaran ee 600.
Sida dariiqa aan ka baxsaneyn, ugu dambeyntii waxaan rabnaa in aan soo celino, kuwa la yaqaan culus-sac, aad u caam ah si looga fogaado taraafikada iyo buuqa ee meelaha la deggan yahay.
Waa hagaag, waa inaad tagtaa tabarka Xiriiriyaha Designer's, dooro ikhtiyaarka Sawir Jidka, buuxi xuduudaha, tani waxay kor u qaadi doontaa Guddiga 3D ee Madaniga ah si loo abuuro isuduwidda.
Waxaan soo jiidanay dariiqa wadada iyo voila, waxaan yeelan doonnaa qeyb hoosaad qorshe ah, iyadoo qorshayaasha la waafajinayo xaalada iyo barteeda dhexe oo ku xiran aaggeeda iyo nambarka tirada badan, dayactirka aaggii aan dhisnay. Sidoo kale astaanta muuqaal kale, oo leh saldhigyo iyo heerar u dhigma geedka.
Hadda, si loo dhameeyo wadada jidka oo aan ka baxsan, waa in aan doorannaa Saar culus, ka dibna dooro in tani ay tagto xarunta, bidixda ama midigta, raadinta wareegga iyo shuruudaha degaanka ee degaanka ku xeeran.
Taasi waa, waxaan haysanaa.
Shaki la'aan, waxaas oo dhan waa la samayn karaa AutoDesk 3D, laakiin haddii aan isbarbar dhigno tirada tillaabooyinka si loo sameeyo is waafajinta, ka dibna la abuuro astaanta, samee qorshooyinka iyo cul-de-sac. Keydintu runtii waa muhiim.
Intaas wixii dhaafsiisan, haddii aan dooneyno inaan isbeddel sameyno. Tusaale ahaan, u wareejinta dhidibka wadada hal dhibic, wax walba waxaa lagu cusbooneysiiyaa duulimaadka, iyadoo la ilaalinayo shuruudaha.
Saaxiibka Desinger. Fududee shaqada nashqadeynta ee AutoCAD Civil 3D labadaba wax qorista iyo ka warbixinta abuurista sagxadaha, isku hagaajinta, jidadka, qaybaha iskutallaabta, baakadaha, mugga googo'an / buuxinta, iyo nidaamyada tuubooyinka.
Marka la eego, Xiriiriyaha Designer's waa hawlaha aan ku sameyno 3D madaniga ah, oo loo fududeeyay hababka caadiga ah ee naqshadeeyayaasha.
Inkasta oo aan ku soo koobay codsiga in sirqoollada firfircoon la xidhiidha line xarunta taxiway ah, waxaa jira qaababka kale oo ku saabsan arrimo kale, sida gelinayn biibiilaha tubada profile ah xataa haddii aanay ahayn waxaa loogu talagalay baabuurta la dhigto a complete firfircoon design network in a magaaleynta, abuurto sharooto 3D oo la xidhiidha dusha sare ee saadaasha hawada, iwm.
Sababtoo ah waxaa lagu dhisay isugeyn cusub, waxaan u maleyneynaa inaysan laheyn dhibaatooyin la mid ah 2012 version 3D oo aan dhawaan u arki doono sanadkan. Fiidiyowkani waxaad arki kartaa aragtida qalabka, iyo daaqad yar oo isku mid ah, laakiin kaliya 3D.
Tag Goobta Eagle
Tag jinsiyada 3D
Post Previous" Hore CadExplorer, raadi oo ku bedel faylasha CAD sida Google
Post Next Honduras: Dib ugu soo noqoshada dhibaatada, dagaalka sokeeye ayaa mar kale ikhtiyaar ahNext »